Hagaajinta sawir leh AutoCAD - Qoorta
Nofeembar, 2007 AutoCAD-AutoDesk, Google Earth / Maps, GIS kala cayncayn ah
Post in kale waxaan ka wada hadalnay khariidado la isku sawiro ama sawirada Google Earth, waxaan aragnay sida loo sameeyo oo leh Manifold y oo leh Microstation, waxaad ku arki kartaa waxoogaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida loo helo muuqaalka Google Earth, isku-duubnaanta iyo sida loo jaro.
Hadda waxaan ku aragnaa sida loo dabooli karo sawirka leh AutoCAD
1. Gali isku-duwayaasha
Si aad u gasho isku-duwaha UTM ee AutoCAD, waxaa lagu sameeyaa amarka dhibcaha. (Sawir / dhibic / dhibco badan)
markaa waxaan isku-dari doonaa isku-duwaha sidan:
laga bilaabo barta taliska waxay noqon doontaa:
farriin, geli, isku duwid, geli, iskuday, iskuday, gal ... ilaa inta aad gashid dhamaantood.
Qaabka isku-duwdu waa: "x iskuduwaha", "y iskuduwaha", si ay u sii jiri karaan
Haddii nidaamku aanu aqbalin, waxaa laga yaabaa inay tahay sababtoo ah qaabeynta habka waxqabadka ma aha mid ku xiran qaabka, markaa qor qoraalka taleefanka PDMODE = 2
Haddii aadan arkin dhibcaha ama ay aad u yaryar yihiin, xulo nooca / dhibcaha dhibicda / dooro nooc cusub oo la arki karo.
Waxaad sidoo kale sameyn kartaa ka soo dhoofiyaan heer sare
Markaad galeyso qodobbada waa inay u ekaataa sidan:
Hadda waxa ay tahay inaan sameyno waa gelinta sawirka, kuwan waxaa lagu sameeyaa «insert / manager manager»
Waxaan riixnaa 'ku lifaaq«, Kadib sawirka waa la baarayaa waxaadna cadeyneysaa in meesha galinta iyo cabirka ay ku shaqeyn doonaan shaashadda.
Ka dibna waxaan dooranaynaa geeska bidix, oo leh snap firfircoon at dhibic, iyo midigta hoose.
Muuqaal, sawirka waxaa loo geeyaa iskudhafyada la cayimay.
2. Sidee loo hubiyaa xogta Google Earth ee cadastare?
Ha u isticmaalin tan arrin culus, sababtoo ah taasi ma bixinayso xogta GoogleEarth. Horaan uga wada hadalnay «Xeerarka»Taasi waxay leedahay xogta Google Earth.
Post Previous«Previous Sidee loo bedelaa unugyada AutoCAD blocks
Post Next Earth Virtual images cusub (Nov 07)Next »
7 Jawaab in "Georefering image leh AutoCAD"
Waad ku mahadsantahay macluumaadka Cardinal. Aad u xiiso badan
JOSE SALAS F isagu wuxuu leeyahay:
Ernesto CArdenal isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ka helay utility juqraafi ahaan sawirrada AutoCad oo leh faylkooda u dhigma ee "adduunka":
GeoRefImg Tixraacyada cusub ee reeraha muraayadaha 'georeferenced' ayaa si otomaatig ah u eegaya feylashahooda adduunka (VLX loogu talagalay AutoCAD 2004 / 2005 / 2006, 2007 / 2008 iyo ADT)
Ruth isagu wuxuu leeyahay:
Olé! Waad ku mahadsan tahay! Ma garanaysid sida aan u qadarino.
Hello Ruth, si aad u qabatid sawirka waxaa jira qalabyo qaar oo aad adigu sameyn kartid sawirro saafi ah.
qabashada ee masaajidka
Sidoo kale boostadaan waxaan ka hadlayaa sida aad u noqon karto daraasad ee agcgis
iyo wixii ka sarreeya waxaan kugula talinayaa in aad aragto boosto mawduucyo jecel halkaas oo ay jiraan dhowr siyaabood oo ay u soo dejisan karaan, soo rogi karaan iyo jahwareer
Hello ... .. oo aad taqaanaa sida loo qaato sawirka GoogleEarth iyo jimicsiga ARCGis? Waxaad noqon lahayd mid waxtar leh haddii aad i siisid fariin.
freddy jimenez isagu wuxuu leeyahay:
hello, mahadsanid, waa arrin waxtar leh, waxaan kuugu mahadcelinayaa inaad u gudbiso macluumaadkan internetka iyo haddii aad leedahay maadooyinkan fadlan ii soo dir mahadnaq.